Metro any Singapore dia fifamoivoizana haingana, mora sy tsy lafo any amin'ny firenena. Ny fitaovana azy dia tsy sarotra indrindra eto amin'izao tontolo izao, noho izany, arakaraka ny sarintany misy metro, azonao atao mora foana ny mahazo any amin'izay ilainao. Ary azonao ampiasaina izany avy any amin'ny seranam-piaramanidina , fa manidina fotsiny any amin'ny firenena (eny an-dalana, misy fomba maro hampihenana ny fandaniana amin'ny sidina ).
Rafitra metro any Singapore
Eo an-dalambe dia ho afaka hamantatra ny metro metro ianao eo amin'ny mari-pamantarana mavo sy ny soratra MRT eo amin'ny soroka. Ny nomerao sy ny nomerao dia voatondro eo amin'ny toerany. Ny metro Singapore dia ahitana tsipika miisa 4, 1 andalana akaiky ary toeram-pivarotana mihoatra ny 70, anisan'izany ny tany sy ambanin'ny tany. Noho izany, ny andalana amin'izao fotoana izao ao amin'ny metro Singapore:
Tondro andrefan'ny Tandrefana (zotra maitso);
Ny andrefana andrefana (miloko volomparasy);
Ny faritra Atsimo-Andrefana (tsipika mena);
Central Line (zipo mavo);
Ao amin'ny sarintany ihany koa no misy ny andalana ary ny metro hazavana dia hita taratra amin'ny voloko. Ny andraikiny dia ny mametraka ny mpandeha amin'ny làlan'ny metro lehibe avy amin'ny faritra tsy misy metro.
Ny anarana fiantsoana, ny doka dia duplicated amin'ny teny anglisy, sinoa ary indianina. Ao anaty fiara tsirairay dia misy drafitra mavitrika ao amin'ny metro eo ambonin'ny varavarana, izay andehananao ankehitriny, ary ny tohatra manaraka dia voalaza amin'ny endriky ny lafiny ny varavarana misokatra.
Cost of Metro any Singapore
Ho an'ny mpizahatany, ny fanontaniana dia tena zava-misy marina, ohatrinona ny saran'ny mandeha amin'ny seranam-piaramanidina ao Singapore. Ny saran'ny tapakila dia miovaova avy amin'ny 1.5 hatramin'ny 4 dollars any Singapore ary miankina amin'ny halaviran-dalana izay tianao haleha. Mividiana tapakila azonao atao ao amin'ny biraon'ny kaontin'ny metro na ny tapakila. Mba hividianana ny saran-tsafidy dia mila miditra ny anaran'ny toeram-piantsenanao ianao. Halefa eo amin'ny efijery ny vidin'ny dia, ary azonao handoavana vola sy vola madinika. Vokatr'izany dia hahazo karatra plastika ianao raha handeha any amin'ny metro. Tsarovy fa rehefa miala ny metro dia azo omena ny milina ary hamerina ny lanjan'ny fiantohana ny plastika - 1 Singapore dollar.
Raha mikasa hanao dia lavitra 6 farafaharatsiny amin'ny metro na bus ianao, dia tokony hividy karatra EZ-link na Singapore Tourist Pass , izay ahafahanao mamonjy hatramin'ny 15% amin'ny saran-dalana. Azo vidiana izany, ary raha ilaina dia novolena tao anaty milina fiara fitateram-bidy any amin'ny toeram-piantsonana sy ny kiosks Passenger Service manokana. Ity karatra ity dia afaka mandoa vola amin'ny fiara fitateram-bahoaka ary na ny fividianana fivarotana aza.
Metro fotoana any Singapore
Amin'ny herinandro dia azonao atao ny mandray ny metro nanomboka ny 5.30 ka hatramin'ny misasakalina, ary amin'ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra - hatramin'ny 6.00 sy hatramin'ny misasakalina. Ny fiarandalamby dia mandalo amin'ny 3-8 minitra.
Ny seranam-piaramanidina ao Singapore dia fomba fiasa avo lenta. Ny fiaran-dalamby maoderina, madio sy mendrika, miasa tsy misy milina, automatique. Ny tranon'ireo toeram-piantsonana dia tsotra sy mahomby, miaraka amin'ny Fiaramanidina, ary tobim-pitaovana ambanin'ny tany - foana ny fiakarana sy ny toeram-pivoahana. Ny fiantsenan'ny fiarandalamby sy ny fiaran-dalamby rehetra dia misy fiara manadio azy, noho izany dia tsy voatery mandevona amin'ny hafanana ianao na inona na inona toe-javatra: na amin'ny toetr'andro mafana, na amin'ny fiara feno amin'ny olona. Mba hisorohana ny mikrôlima amin'ny toeram-piantsonana, ny faritra miandry ny fiaran-dalamby dia misaraka amin'ny làlambe amin'ny varavarankely iray. Misokatra rehefa tonga ny fiaran-dalamby.
Ny seranam-piaramanidin'i Singapore dia very Eoropeana maro, noho izany dia mitazaka amim-pitandremana ny fomba fitondra mendrika sy haingam-pandeha - avy eo dia hanana ny fahatsapana tsara indrindra ianao!
Mandeha any amin'ny Maldives
Fiompiana fluid nandritra ny fitondrana vohoka
Akanjo mivalona avy amin'ny hoditra kanto
Jeans, nipoaka avy amin'ny lohalika
Ny pataloha mody - ny lohataona 2016
Fiarovana amin'ny hoditra
30 mpiara-miasa tsy nampoizina teo amin'ny fiaramanidina, ary ankoatra izay tsy tokony ho tianao
Vehivavy Puma Shoes
Mozzarella ao an-trano
Inona avy ireo karazana saka?
Headgear - Lohataona 2016
Snowmobiles ho an'ny ankizy
Fanatanjahana ho an'ny hatsembohana tsara
Sakafo avy amin'ny spinach
Cream crème 30 taona - valiny